ဗြိတိန်မှာ တွေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဗီဇပြောင်းလဲမှုသစ် အန္တရာယ်
၂၂ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀
ဗိတိန်မှာ တွေ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဗီဇပြောင်းလဲမှုသစ် အန္တရာယ် (Reuters)
ကိုဗစ် 19 ရောဂါပိုးဗီဇ ဗြိတိန်မှာ ပြောင်းလဲလာတာက ပိုကူးစက်လွယ်တာကြောင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပိုကာကွယ်ကြဖို့၊ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက၊ မနေ့က အထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲပုံနဲ့ သက်ရောက်ပုံတွေကို ဒီဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရနဲ့၊ အမေရိကန် CDC ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှာ လေ့လာသင်ကြားခဲ့တဲ့၊ ကူးစက်ရောဂါဗေဒကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကို ကိုဝင်းမင်းကမေးရာမှာ အခုလိုစရှင်းပြပါတယ်။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး ။. ။ အဓိကကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့သဘောကတော့ သူရဲ့ပိုးကူးခံရသူများလာတာနဲ့အမျှ ဒီပိုးက ကော်ပီပေါင်းမြောက်မြားစွာပွားတာ။ ဥပမာ လူတယောက်ရဲ့ခန္ဒာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်းသွားမယ့် ပမာဏက ဒီမူလထက်ကို အဆပေါင်းထောင်ပေါင်းသောင်းပေါင်း ဗိုင်းရပ်စ်အကောင်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင် မီလီယံ ထရီလီယံ (သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ) ပွားတာပေါ့နော် ။ ပွားတဲ့အခါကြတော့ မူလကော်ပီနဲ့ တူချင်မှတူမှာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ မူရင်း ဝူဟန်မှာ သားငါးဈေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ နောက်ဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့ လူတယောက်မှာရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က တော်တော်ကြီးကို ကွဲပြားခြားနားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများသွားတာပေါ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ပတ်ဝန်ကျင်အခြေအနေတွေ၊ ကိုယ်ခံအားတုံပြန်မှုမတူတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာ ကြားထဲမှာ မျိုးတွေကပွားတာကို။ ကျနော်တို့ ပထမလေ့လာမိသလောက်ဆိုရင် မျိုးစိတ်တွင်ပဲ သုံးဆယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ကျနော်တို့ မျိုးရိုးဗီဇက အရင်တခေါက်ရခိုင်မှာ ဒုတိယလှိုင်းသဘောမျိုးစတွေ့ခဲ့တုံးက ပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။
ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။. ။ အဲဒီမှာတော့ (၁၀)ဆလောက်အထိကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း တွေ့ခဲ့ရြ့ပီပေါ့။ ဒုတိယလှိုင်းအစမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပိုးဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီဒဏ်ကိုခံနေရတာ။ အဲဒီလိုကြားထဲမှာ နောက်ထပ် ယူကေ ဗြိတိန်မှာလည်း ထပ်ပြီးတော့ခံနေရတာ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ထားသလိုပါပဲ။ ထပ်ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး mutation ဖြစ်ပြီးတော့ ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်တယ်ပေါ့နော်။ သူတို့ကတော့ အမျိုးမျိုးတော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်။ အရင်ကနဲ့စာရင် အဆပေါင်းများစွာပြန်လာနိုင်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ လက်ရှိတွေ့ထားတဲ့ဟာလည်း တော်တော်မြန်နေပြီပေါ့။ ယူကေ ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတောင်မှာ ဥရောပဖက်က နည်းနည်းစိုးရိမ်တဲ့အခါကြတော့ လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေလျော့တာတို့၊ ယူကေ နဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်တာတို့ပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုးကတော့ ဘိုင်အိုလိုဂျီခေါ်မှာပေါ့။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေမှာ ဒီလိုမျိုးmutation တွေက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုမျိုး မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းတာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ့နော်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကရော.
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး ။. ။.mutation ဖြစ်ခြင်းအားဖြစ် မျိုးထွန်းခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးတော့ ကူးစက်မြန်တာမျိုးဖြစ်နိုင်သလို ပိုပြီးပြင်းထန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုပြီးကူးစက်မြန် ပြင်းထန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကူးစက်မှုနှုန်းနှေးသွားတာ အားပျော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်ရှိကိုဗစ်နိုင်တင်းရဲ့ အနေအထားကတော့ ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်ပြီးတော့ ပြင်းအားလျော့သွားတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရဘူးပေါ့။ ကူးစက်မှုတွေမြန်လာတယ်။ ပြင်းထန်မှုနှုန်း သေဆုံးမှုနှုန်းတွေက လျော့မသွားတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပြီးတော့ လူတွေအများကြီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့။ ပိုပြီးတော့သတိထားကြဖို့ပေါ့။ ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစိတ်တခု တခု ကမ္ဘာကြီးရဲ့တနေရာမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ်ဆီကိုလည်း အချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်ပေ့ါနော်။ ဒီလိုမျိုးရောက်လာခဲ့ရင်လည်း သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး မျိုးရိုဗီဇတခုလုံးကို အသေးစိတ် ကို ဖြစ်စဉ်ကို လိုက်လေ့လာတာပေါ့နော်။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါကိုစမ်းသပ်လျှက်ရှိတယ်ပေါ့ဆရာ။ အခုလက်ရှိ ယူကေမှာတွေ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော် ။ ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ဒီလိုမျိုးတွေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ကိုယ်ဆီမှာရှိတဲ့ပိုးကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ကျနော်တို့မှာလည်း ဘိုင်အိုလောဂျစ် တွေရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အရင်တခေါက်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဒုတိယလှိုင်းပေါ့နော်။ အခုလိုထပ်ပြောင်းပြန်တော့ တတိယလှိုင်း ကို စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး ။. ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့က စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဒီမျိုးပြောင်းတဲ့နှုန်းကို တချိန်လုံးသတိပေးနေရတာပါ။ အဲဒါတော့ လက်ရှိက ယူကေမှာပဲတွေ့ရှိသေးတာပါ။ ဥရောပမှာတောင်မရောက်သေးပါဘူး။ ဥရောပကလည်း သူတို့ဆီရောက်လာမှာ စိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဝူဟန်မှာဖြစ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ ဝူဟန် ကနေ အမေရိကန်ရောက်၊ အမေရိကန်မှာ အများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်. ကျနော်တို့မဖြစ်ဖူးထင်နေမယ်လဲ အချိန်တန်တော့ ကျနော်တို့လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ သတိမပြတ်ထားပြီးတော့ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာရမှာပေါ့။ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းကတော့ အတူတူပဲပေါ့နော်။ ပိုပြီးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အလုံပိတ်အခန်းပေါ့နော်။ လူစုစုရှိတဲ့နေရာတွေ၊ နောက်တခုက လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ့။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာ။
ကိုဗဈ 19 ရောဂါပိုးဗီဇ ဗွိတိနျမှာ ပွောငျးလဲလာတာက ပိုကူးစကျလှယျတာကွောငျ့၊ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ပိုကာကှယျကွဖို့၊ ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာနက၊ မနကေ့ အထူးသတိပေးခကျြထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။
ဒီမြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲပုံနဲ့ သကျရောကျပုံတှကေို ဒီဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရနဲ့၊ အမရေိကနျ CDC ကူးစကျရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဌာနမှာ လလေ့ာသငျကွားခဲ့တဲ့၊ ကူးစကျရောဂါဗဒေကြှမျးကငျြသူ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးကို ကိုဝငျးမငျးကမေးရာမှာ အခုလိုစရှငျးပွပါတယျ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး ။. ။ အဓိကကတော့ ဗိုငျးရပျဈတှရေဲ့သဘောကတော့ သူရဲ့ပိုးကူးခံရသူမြားလာတာနဲ့အမြှ ဒီပိုးက ကျောပီပေါငျးမွောကျမွားစှာပှားတာ။ ဥပမာ လူတယောကျရဲ့ခန်ဒာကိုယျထဲကိုဝငျသှားမယျဆိုပမေဲ့ ဗိုငျးရပျဈဝငျးသှားမယျ့ ပမာဏက ဒီမူလထကျကို အဆပေါငျးထောငျပေါငျးသောငျးပေါငျး ဗိုငျးရပျဈအကောငျပေါငျးမရတှေကျနိုငျအောငျ မီလီယံ ထရီလီယံ (သနျးထောငျပေါငျးမြားစှာ) ပှားတာပေါ့နျော ။ ပှားတဲ့အခါကွတော့ မူလကျောပီနဲ့ တူခငျြမှတူမှာပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ မူရငျး ဝူဟနျမှာ သားငါးဈေးမှာတှခေဲ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ နောကျဆုံးကူးစကျခံရတဲ့ လူတယောကျမှာရှိတဲ့ ဗိုငျးရပျဈက တျောတျောကွီးကို ကှဲပွားခွားနားနိုငျတဲ့အခှငျ့အလမျးမြားသှားတာပေါ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ လူမြိုးပေါငျးစုံခန်ဒာကိုယျထဲမှာ ပတျဝနျကငျြအခွအေနတှေေ၊ ကိုယျခံအားတုံပွနျမှုမတူတဲ့အခွအေနတှေကွေားထဲမှာ ကွားထဲမှာ မြိုးတှကေပှားတာကို။ ကနြျောတို့ ပထမလလေ့ာမိသလောကျဆိုရငျ မြိုးစိတျတှငျပဲ သုံးဆယျလောကျရှိတယျပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ကနြျောတို့ မြိုးရိုးဗီဇက အရငျတခေါကျရခိုငျမှာ ဒုတိယလှိုငျးသဘောမြိုးစတှခေဲ့တုံးက ပွောငျးခဲ့တယျပေါ့နျော။
ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ။. ။ အဲဒီမှာတော့ (၁၀)ဆလောကျအထိကူးစကျနိုငျတယျဆိုတာလညျး တှခေဲ့ရွ့ပီပေါ့။ ဒုတိယလှိုငျးအစမှာတှခေဲ့တဲ့ပိုးဆိုတော့ ကနြျောတို့လညျး အဲဒီဒဏျကိုခံနရေတာ။ အဲဒီလိုကွားထဲမှာ နောကျထပျ ယူကေ ဗွိတိနျမှာလညျး ထပျပွီးတော့ခံနရေတာ ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာန ထုတျပွနျထားသလိုပါပဲ။ ထပျပွီးတော့ ဒီလိုမြိုး mutation ဖွဈပွီးတော့ ကူးစကျမှုနှုနျးမွနျတယျပေါ့နျော။ သူတို့ကတော့ အမြိုးမြိုးတော့ပွောနကွေတာပေါ့နျော။ အရငျကနဲ့စာရငျ အဆပေါငျးမြားစှာပွနျလာနိုငျတဲ့ဟာလညျးရှိတယျပေါ့နျော။ လကျရှိတှထေ့ားတဲ့ဟာလညျး တျောတျောမွနျနပွေီပေါ့။ ယူကေ ရဲ့ ဗိုငျးရပျဈကိုတောငျမှာ ဥရောပဖကျက နညျးနညျးစိုးရိမျတဲ့အခါကွတော့ လကွေောငျးခရီးစဉျတှလြေော့တာတို့၊ ယူကေ နဲ့ ကူးလူးဆကျဆံတဲ့လမျးကွောငျးတှပေိတျတာတို့ပေါ့နျော။ ဒီလိုမြိုးကတော့ ဘိုငျအိုလိုဂြီချေါမှာပေါ့။ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ပတျသကျတာတှမှော ဒီလိုမြိုးmutation တှကေ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ဒီလိုမြိုး မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးတာရဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုပေါ့နျော။ ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးကရော.
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး ။. ။.mutation ဖွဈခွငျးအားဖွဈ မြိုးထှနျးခွငျးအားဖွငျ့ ပိုပွီးတော့ ကူးစကျမွနျတာမြိုးဖွဈနိုငျသလို ပိုပွီးပွငျးထနျတာလညျးဖွဈနိုငျတယျ။ ပိုပွီးကူးစကျမွနျ ပွငျးထနျတာလညျးဖွဈနိုငျတယျ။ ကူးစကျမှုနှုနျးနှေးသှားတာ အားပြော့တာလညျးဖွဈနိုငျတယျ။ လကျရှိကိုဗဈနိုငျတငျးရဲ့ အနအေထားကတော့ ကူးစကျမှုနှုနျးမွနျပွီးတော့ ပွငျးအားလြော့သှားတဲ့အထောကျအထားမတှရေ့ဘူးပေါ့။ ကူးစကျမှုတှမွေနျလာတယျ။ ပွငျးထနျမှုနှုနျး သဆေုံးမှုနှုနျးတှကေ လြော့မသှားတဲ့အခါ ပိုပွီးတော့ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ဖွဈပွီးတော့ လူတှအေမြားကွီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါလညျးရှိတယျပေါ့။ ပိုပွီးတော့သတိထားကွဖို့ပေါ့။ ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစိတျတခု တခု ကမ်ဘာကွီးရဲ့တနရောမှာဖွဈနပွေီဆိုရငျ ကိုယျဆီကိုလညျး အခြိနျမရှေးရောကျလာနိုငျတယျပေ့ါနျော။ ဒီလိုမြိုးရောကျလာခဲ့ရငျလညျး သိရအောငျဆိုပွီးတော့ ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာနအနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး မြိုးရိုဗီဇတခုလုံးကို အသေးစိတျ ကို ဖွဈစဉျကို လိုကျလလေ့ာတာပေါ့နျော။ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ပတျသကျပွီး ဒါကိုစမျးသပျလြှကျရှိတယျပေါ့ဆရာ။ အခုလကျရှိ ယူကမှောတှတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈပေါ့နျော ။ ကနြျောတို့ဆီမှာလညျး ဒီလိုမြိုးတှလေ့ာနိုငျတယျပေါ့။ ကနြျောတို့ကိုယျဆီမှာရှိတဲ့ပိုးကိုလညျး မကျြခွမေပွတျစောငျ့ကွညျ့နတေယျ။ ကနြျောတို့မှာလညျး ဘိုငျအိုလောဂဈြ တှရှေိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အရငျတခေါကျမြိုးရိုးဗီဇပွောငျးတဲ့အခြိနျမှာ ဒုတိယလှိုငျးပေါ့နျော။ အခုလိုထပျပွောငျးပွနျတော့ တတိယလှိုငျး ကို စိုးရိမျရတဲ့အနအေထားပေါ့နျော။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး ။. ။ ဒါကတော့ ကနြျောတို့က စိုးရိမျရပါတယျ။ ဒီမြိုးပွောငျးတဲ့နှုနျးကို တခြိနျလုံးသတိပေးနရေတာပါ။ အဲဒါတော့ လကျရှိက ယူကမှောပဲတှရှေိ့သေးတာပါ။ ဥရောပမှာတောငျမရောကျသေးပါဘူး။ ဥရောပကလညျး သူတို့ဆီရောကျလာမှာ စိုးရိမျနတောပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့လညျး ဝူဟနျမှာဖွဈတဲ့ ဗိုငျးရပျဈရောကျလာတယျပေါ့နျော။ ဝူဟနျ ကနေ အမရေိကနျရောကျ၊ အမရေိကနျမှာ အမြားကွီးဖွဈနတေဲ့အခြိနျ. ကနြျောတို့မဖွဈဖူးထငျနမေယျလဲ အခြိနျတနျတော့ ကနြျောတို့လညျးဖွဈတာပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ သတိမပွတျထားပွီးတော့ ကာကှယျရေးနညျးလမျးတှကေို လိုကျနာရမှာပေါ့။ ကာကှယျရေးနညျးလမျးကတော့ အတူတူပဲပေါ့နျော။ ပိုပွီးသတိထားဖို့လိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့အလုံပိတျအခနျးပေါ့နျော။ လူစုစုရှိတဲ့နရောတှေ၊ နောကျတခုက လကျရှိသုံးနတေဲ့ကာကှယျဆေးတှပေေါ့။ ဒီဗိုငျးရပျဈအပျေါမှာ သကျရောကျမှုရှိတယျပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ ဆရာ။
ဗီဇ ပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး ဥရောပသမဂ္ဂ ညီညွတ်ဖို့လိုအပ် (ဂျာမနီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး)
ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဘိုင်ဒန် ကိုယ်တိုင် COVID 19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီ
COVID 19 ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု